गुल्मेली आन्दोलनमा कहिले के भयो ? – Gulmiews
गुल्मेली आन्दोलनमा कहिले के भयो ?
४ पुष २०७३, सोमबार २१:१५ गुल्मिन्युज
पुस ४ गते, गुल्मी । सरकारले मंसिर १४ गते संसदमा दर्ता गरेको संबिधान संसोधन प्रस्तावको बिरुद्ध शुरु भएको गुल्मेली आन्दोलन दुई दिनका लागि केहि खकुलो भएको छ । मंसिर १५ गतेबाट जारी गुल्मी बन्द दुई दिनका लागि फिर्ता भएपछि जिल्लाको जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ । १९ दिन लामो बन्दले सर्वसाधरणहरुलाई धेरै मर्का परेको भन्दै आइतबार साँझ बसेको आन्दोलन परिचालन कमिटीको बैठकले दुई दिनलाई बन्द केहि खुकुलो बनाएको हो । दुई दिन सोमबार र मंगलबार बिहान ६ बजेबाट ११ बजे सम्म जिल्ला बन्द कायम नै रहेको छ । दिउँसोमा सहज वातावरण भएकाले जिल्लाबाट छुट्ने लामो तथा छोटो दुरीका सवारीका साधनहरु छुटेका छन भने उद्योग कलकारखाना, ब्यापार ब्यवसाय समेत सञ्चालनमा आएका छन ।
संयुक्त संघर्ष समिति गुल्मीले आन्दोलनको स्वरुप पनि परिवर्तन गरेको छ । सोमबार संयुक्त संर्घष समितिले १९ दिने आन्दोलनको समिक्षा र आगामी कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । सोमबार र मंगलबार बिहान १ घण्टा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम यथाबत राखिएको आन्दोलन परिचालन कमिटीका संयोजक भुवन प्रसाद श्रेष्टले बताउनुभयो । धर्नाका कारण सोमवार पनि १ घण्टा सरकारी कामकाज ठप्प हुनुका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित अधिकांश कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारीहरु कार्यालय समयमा प्रबेश गर्न पाएका थिएनन । पुस ४ गतेको संसद बैठक, ५ गतेको सर्वोच्चको आदेश र परिस्थती अनुसार आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउने निर्णय भएको सयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
कहिले के आन्दोलन भयो ?
प्रदेश टुक्राउन लागिएको बिरोधमा अनौपचारिक रुपमा कार्तिक २८ गतेबाट शुरु भएको आन्दोलन यद्यपी जारी छ । औपचारिक रुपमा मंसिर १४ गते सरकारले संसदमा संविधान संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि १५ गतेबाट गुल्मेली आन्दोलनको शुरुवात भएको थियो । मंसिर १५ गतेबाट घोषणा गरिएको जिल्ला बन्द आज सम्म आइपुगेको छ । मंसिर १६ देखि १९ गते नियमित रुपमा बिरोध जुलुस प्रर्दशन भएका थिए । त्यसपछि मंसिर २० गते महेन्द्र उच्च माध्यामीक विधालयमा वृहत आम सभा सम्पन्न भएको थियो ।
भने २१ गते सरकारको उल्टो कदमको बिरुद्धमा धर्ना तथा उल्टो जुलुस प्रर्दशन, २२ गते सरकारलाई आफ्ना माग सुनाउन सिठी जुलुस प्रर्दशन साथै मंसिर २३ गते सरकारले पहाडलाई तराईबाट अलग्याएर भोकमरी निम्त्याउन लागेको भन्दै थाल जुलुस प्रर्दशन भएको थियो । यसैगरी जिल्ला केन्द्रित आन्दोलनलाई गाउँ सम्म प¥याउन मंसिर २४ गते जिल्लाका मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरु शान्तिपुर, वामिटक्सार, मजुवा, खैरेनी, रिडि, बलेटक्सार, इस्मा र पुर्कोट दहमा वृहत सभा गरिएको थियो । साथै सोहि दिन सरकारले गरेका फोहोरी कामलाई बढार्न कुचो जुलुस प्रर्दशन भएको थियो ।
आन्दोलनकै क्रममा मंसिर २५ गते लाठी जुलुस, मंसिर २६ गते खबरदारी गर्न सडक साहित्य गर्नुका साथै २७ गते मानव साङलो बनाएर जिल्ला प्रशासन घेराउ गरिएको थियो । त्यस्तै मंसिर २७ जिल्लामा बृहत आम सभाको आयोजना गरिएको थियो । जुन सभालाई सांसद चन्द्र भण्डारी, कमला बिश्वकर्मा, पुर्व मन्त्री एवं नेकपा एमाले केन्द्रिय सचिव प्रदिप ज्ञवालीले संबोधन गर्नुभएको थियो । २८ गते कालो पट्टी बाँधेर दौड जुलुस प्रर्दशन भएको थियो ।
भने २९ गते गुल्मेली महिलाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री ज्ञापन पत्र सहित कैची, फुलको माला, सिगो, धागो, नेपालको नक्सा उपहार पठाएका थिए । त्यस्तै ३० गते नमुना मतदान साथै साँझ ४५ किलोमिटर मसाल जुलुस प्रर्दशन भएको थियो । त्यस्तै पुुस १ देखि ३ गते सम्म प्रदेश स्तरिय आम हडतालको घोषणा गरियो । पुस १ गते गुल्मीले सरकारी कार्यालयमा ताला लगाउन कार्यक्रम थप्यो । सोहि दिन प्रसासनमा लगाइएको ताला खुलाउने क्रममा प्रहरी र प्रर्दशनकारी बिच झडप भयो । झड्पमा आन्दोलनकारी र प्रहरी गरी चार दर्जन घाइते भए । पुस २ र ३ गते पनि बिरोध प्रर्दशन र कार्यालयहरुमा ताला लगाइयो । शनिबारको बैटकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले माफि मागे ।